Network governemanta - China Chao Yu milina
Network governemanta, izay ampiasaina mba hanambatra ny fitomboan'ny tontonana, ny plug-in, ny plug-in boaty, ny elektronika singa, ny fitaovana sy ny milina faritra sy ny singa, mba hanao ny fametrahana boaty. Araka ny amin'izao fotoana izao karazana, lohamilina kabinetra, rindrina kabinetra, Network kabinetra, Standard governemanta, manan-tsaina varavarana karazana ivelan'ny trano kabinetra sy ny sisa. Fahaiza soatoavina dia eo 42U sy 2U.
Simple rafitra, mety fandidiana, tsara tarehy hafa: marina habeny, ara-toekarena sy azo ampiharina;
- iraisam-pirenena malaza mora tezitra fitaratra fotsy varavarana fidirana;
Ny endriny ambony amin'ny lavaka boribory rivotra;
Mandritra izany fotoana izany, mametraka ny kodiarana sy ny fanohanana ny tongony;
- tsy voatery namita Accessories.
ny tambajotra kabinetran'ny dia ahitana ny toetsika sy ny rakotra fanaovam-panavotana (varavarana), izay amin'ny ankapobeny manana endrika mahitsizoro, ary apetraka amin'ny tany. Manome mety tsara ho an'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ara-dalàna fiasan'ny fitaovana elektronika. Izany no rafitra ambaratonga raha tsy aorian'ny fivoriambe. Ny governemanta izay tsy manana rafitra mihidy dia antsoina hoe filanjana azy.
tany am-boalohany indrindra tambajotra kabinetra ka narianao na zoro alalan'ny visy, rivet mifandray na welded any an-toe-ny governemanta, ary na ny fanaka vy manify lovia rakotra (varavarana) sy. Io karazana governemanta dia lehibe, mibahan-toerana, tsotra, tsy nisy intsony. Noho ny fampiasana transistors, Integrated faritra sy ny singa isan-karazany, hevitry ny Ultra voalamina tsara, ny firafitry ny governemanta ihany koa ny kely, Fototra iorenan'ny fanatanterahana ny tari-dalana ny fampandrosoana. Kabinetra ny tambajotra efa nivoatra ho andiana plug sy ny faladia tamin'ny habeny sasany. Ampidiro eto ny faritra voafefy, plug-in fivoriana fandaharana ny marindrano sy mitsangana fandaharana roa sokajy. Ny kabinetra tambajotra mampiasa ny fitaovana amin'ny ankapobeny vy manify lovia, ny fizarana tsirairay karazana endrika vy fizarana, ny mombamomba azy sy ny isan-karazany aluminium injeniera plastika, etc .. In
Post fotoana: Jan-17-2018